Rag Lagu Eedeeyay in ay u Basaasayeen Kenya, Mareykanka, oo Xukuno Dil ah Lagu Fuliyay – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Rag Lagu Eedeeyay in ay u Basaasayeen Kenya, Mareykanka, oo Xukuno Dil ah Lagu Fuliyay
Maxkamadda Xarakada Al-shabaab ee Gobolada Baay iyo Bakool ayaa Xukuno dil ah ku fulisay Rag lagu eedeeyay in ay u basaasayeeen Dowladdaha Kenya, Mareykanka iyo dowladda Federaalka Soomaaliya.
Fagaaraha weyn ee deegaanka Yaaq-Baraawe ee gobolka Baay ayaa shalay gelinkii dambe lagu dilay illaa iyo 3 ruux oo lagu helay in ay u basaasayeen sirdoonnada dowladda Mareykanka iyo dowladda federaalka Soomaliya.
Shaqsiyaadka Xukunada Lagu Fuliyay ayaa kala ahaa.
1-C/llaahi daamey Maxamed Nuur oo 36 sana jir waxay Shabaab ku eedeeyeen in uu ahaa mid la sheeya CIA-da Mareykanka wuxuu sheegay in ay shaqa geliyeen saraakiil ku sugan garoonka diyaaradaha Balli-doogle ee duleedka degmada wallaweyn Shabeelaha Hoose.
Qalabka lagu hago diyaaradaha Drone-ka loo yaqaan ee aan duuliyaha laheyn ayuu C/llaahi kasoo qaaday saraakiisha Mareykanka wuxuu doonayay in uu ku dhajiyo gaari uu lahaa sarkaal katirsan xarakada Al Shabaab balse qorshahaasi waa la fashiliay sida Shababa ay hadalka u dhigeen.
2-Max’med iimaan xasan oo 42 sana jir ah ayaa kamid ahaa raggii shalay ladilay ee lagu helay falka Basaasnimada ah wuxuuna si gaar ah ula shaqeynayay PS-ta maamulka ‘Jubbaland’ wuxuu kala shaqeeyay sahanka jidadka mara duleedka magaalada Kismaayo iyo marka ciidanka Kenya ay qaadayaan duullaano ka dhan ah Al-shabaab, waxay Shabaab sheegeen bil walba wuxuu mushaar ahaan u qaadanayay $150.
3-Maxamed shariif Cali 21 sana jir ah wuxuu ahaa basaas u shaqeeya sirdoonada caalamiga ah ee ku sugan magaalada Kismaayo waxaa shaqa geliyay sarkaal katirsan maamulka Jubba-land, shaqada uu Jubba-land u qaban jiray ayaa aheyd uruurinta macluumaadka ku aaddan soo gudbinta dhaq dhaqaaqyada ciidamada Xarakada Al Shabaab marka ay weerar ku qaadayaan Kismaayo ama saldhigyada ciidamada Kenya.